Dumarka waa weyn oo loo galmoodo oo lashegay in ee cafimaad daro kujirto daawo muqaalka | Arrimaha Bulshada
Home Bulshada Dumarka waa weyn oo loo galmoodo oo lashegay in ee cafimaad daro kujirto daawo muqaalka
Bulsha:- Waxa ay u eegtahay in wadanka England ay xaraarada raaxada sariirtu aad u badan tahay. Taas oo keenta dhaawacyo kala duwan oo ka soo gaadha lamaanaha hawsha u gaarka ah ku guda jira. Hadba arintan ayaa waxa baadhitaan ka soo sameeyay Phonepiggybank si loo ogaado dhaawaca soo gaadha lamaanaha marka ay raaxaysanayaan oo xaraaradoodu meel sare marayso iyo sida ay u dhacaan.
Hadaba meesha ugu
khatarsan ee lagu sameeyo raaxada guurka ayaa ah kursiga qolka fadhiga, halkaas oo ah meesha dhaawaca ugu badani ka dhaco. Ilaa 10% ayaa ayaguna ka dhaca sariiraha marka ay ku jiraan xiliga jacaylku marayo meesha ugu saraysa.
Afhayeen u hadlayay phonepiggybank ayaa waxa uu ku taliyay in ay haboon tahay in wadada laga sii faaruqiyo alaabta ku jajabi karta xiliga galmada, taas oo u keeni karta lamaanayaasha dhaawac